‘डेमो’ देखाउँदा गोली लागेका शाहीको निधन, हार्दिक श्रदाञ्जली | paniphoto
‘डेमो’ देखाउँदा गोली लागेका शाहीको निधन, हार्दिक श्रदाञ्जली
paniphoto	July 10, 2012	Post navigation
गत जेठ २६ गते अस्कलका उपसभापति वीरबहादुर राउतको कोठामा पेस्तोल यसरी चलाउँने भनेर डेमो देखाउँदै गर्दा गोली लागेका वसन्त शाहीको आज निधन भएको छ । गोली लागेको एक महिना पछि उपचारकै क्रममा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उनको निधन भएको हो । हामी अस्कल पढ्दा उनीसँग भेट भइरहन्थ्यो । अस्कल छोडेपनि उनीसँगको सम्बन्ध बेला बेला काठमाण्डौको सडकमा हुने भेटले नविकरण हुन्थ्यो । उनी विद्यार्थी नेता थिए । अनेरास्ववियु अस्कल इकाई कमिटीका उनी सदस्य थिए । तर नेता भएर नेताले झै देखावटी चाप्लुसी र ढोंग उनको थिएन । उनको मिलनसार व्यवहारबाट हामीहरु निकै प्रभावित थियौं । उनको सामिप्यताको सम्झना आइरहेछ । उनको आत्माले शान्ति पाओस् । घटनाबारे एक महिना अगाडी लेखिएको ब्लग
एमाले अखिलका नेता तथा अस्कल स्ववियूका उपसभापति वीरबहादुर रावतको कोठामा बसन्त शाही, मनोज खत्री, मुकेश नेपाली र वीरबहादुर रावत समेत सँगै थिए । उनीहरु सो कोठामा पेस्तोल कसरी लोड गर्ने र कसरी चलाउँने भन्ने बारेमा छलफल गर्दै थिए । सिक्नका लागि उनीहरुले साँच्चैको पेस्तोल राखेका थिए । पेस्तोल कसको हो खुलाइएको छैन । सोही पेस्तोल देखाउँदै सिकाउँदै गर्दा अकस्मात गोली चल्यो र शाहीलाई गोली लाग्यो ।
ब्लगको पुरा अंश तल पढ्नुहोस्
आज एमाले, कांग्रेस लगायत २२ दलको काठमाण्डौमा बिरोध सभा हुने कार्यक्रम थियो । नेता तथा कार्यकर्तालाई भ्याइनभ्याइ हुनु पर्ने हो । हामीमा पनि चासो निकै थियो, विघटित संविधानसभामा दोस्रो र तेस्रो लगायतका २२ दलहरुले एकै ठाउँमा मोर्चाबन्दी गरेर गरिने विरोध सभा कत्रो होला भन्ने । तर चासो एक्कासी अन्तै मोडियो । कारण, बिहानै अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल), काठमाण्डौ, अखिल क्याम्पस इकाइ, प्रारम्भिक कमिटिका उपाध्यक्ष बसन्त शाहीलाई गोली हानिएको सुनियो । पहिले शाहीलाई उनकै घरमा गोली हानिएको बताइए पनि उनलाई नयाँ बजारको एउटा कोठामा गोली हानिएको रहेछ ।
प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि अस्कल स्ववियूका उपसभापति वीरबहादुर रावत लगायत अन्य ४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाको प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । अनुमान गरिए झै शाहीलाई अर्कै संगठन वा अखिलकै अर्को गुटले गोली हानेको भने होइन रहेछ । उनलाई त आफ्नै साथीले गोली यसरी पड्कन्छ, देखिस् भनेर डेमो देखाउँदा झुक्किएर गोली लागेको रहेछ ।
गोली लाग्ने बित्तिकै डेमो देखाउँदै गरेका मनोज खत्री त्यहाँबाट कुलेलाम ठोके । (अपडेट: गोली हान्ने मनोज खत्री हालसम्म फरार रहेका छन् ।) गोली लागेका शाहीलाई रावतले पहिले मोडल अस्पताल र पछि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याएका थिए । शाही अहिले खतरामुक्त भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
किन चाहियो विद्यार्थी नेतालाई पेस्तोल ?
पहिले त अस्कल अखिलका उपाध्यक्षलाई गोली हानियो भन्ने सुन्ने बित्तिकै पक्कै पनि अखिलभित्रकै आन्तरिक गुटको काम होला भन्ने सोचियो । ठुला नेताहरु मिलेको जस्तो देखिए पनि अस्कलमा भने अझै पनि दुई गुटहरु कायमै छन् । यी दुई गुटमा यसअघि गोली नै नचलेको भएपनि अस्कलमा निकै पटक खुकुरी प्रहार तथा सानातिना झगडाहरु हुँदै आएका थिए । यही राजनीतिको चरम रुप हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एउटै गुटमा रहेका वीरबहादुरलाई नै प्रहरीले पक्राउ गरेपछि घटनालाई निकै रहस्यमय मानिएको थियो ।
प्रहरीले झगडाको कारणले नभएर डेमो देखाउँदा दुर्घटनाबश गोली चलेको भन्ने जानकारी दिए पछि एउटा रहस्यबाट पर्दा त उठेको छ । तर यो सँगै अनेकौ प्रश्नहरु उठेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका नेताहरुलाई देशले शान्तिप्रक्रिया पुरा गरिसकेको अवश्थामा पनि किन हतियारको आवश्यकता पर्‍यो ? विद्यार्थीको हकहितका लागि राजनीति गर्नेहरुले हतियार उठाउँनुले आजको राजनीति कतातिर र कस्को हातमा जादैछ भन्ने अर्को जटिल प्रश्न उब्जेको छ ।
विद्यार्थी हकहितका लागि राजनीति गर्नेहरुलाई पेस्तोलको किन आवश्यकता पर्छ र सिक्नु पर्‍यो ? त्यो हतियार कहाँबाट आयो ? अस्कलका नेता वा अन्य कलेजका जुनसुकै संगठनका नेताहरुसँग भएको एकमात्र पेस्तोल त त्यो हैन होला ! अब यसको खोजी कसले गर्ने ?
This entry was posted in समाचार/विश्लेषण and tagged को, गोली, डेमो, देखाउँदा, निधन, लागेका, शाही, श्रदाञ्जली, हार्दिक. Bookmark the permalink.	5 thoughts on “‘डेमो’ देखाउँदा गोली लागेका शाहीको निधन, हार्दिक श्रदाञ्जली”	nabin nepal says:	July 10, 2012 at 11:03 pm	अब हाम्रो देश मा नेता हुने पछि तही विद्यार्थी हुन् ..अनि येसो जंगली पारा सिकको होला नि ..कतै पछि देश को नै ठुलो दल पो बन्ने हो कि …..हैन हौ अरु कुरा मा चै सबै घोकौचन ..प्राक्टिकल की हुदैन …अनि बन्दुक चै प्राक्टिकल सिकाको त्यो पनि college मा …सबै भन्दा अच्चम्म हाम्रो देश मै हुन्छ ..नेता पनि अच्चम्म को छन्
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	विकाश says:	July 10, 2012 at 11:36 pm	नविनजी तपाईलाई अलिकति गलत सन्देश गएछ । गोली चलेको क्याम्पसमा हैन, डेरामा हो । अरु त यस्तै त हुने हुन् नि नेपालका नेता । त्यही भएर यस्तो छ नेपालको हालत ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	nabin nepal says:	July 11, 2012 at 2:13 am	मेरो मतलब college मै चलाको भन्ने हैन …सिकेको त तही college मै हो नि त …student त हुन् नि ….डेरा मै भय पनि बन्दुक चै किन चलाउनु.. भन्ने कुरा हो ..
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	विकाश says:	July 11, 2012 at 10:00 am	सही कुरा
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	Karmath Subedi says:	July 11, 2012 at 12:30 am	दुःख लाग्यो यो खबरले । वसन्त शाहीको आत्माले शान्ति पाओस् र शोकसन्तब्ध परिवार प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली छ मेरो ।